ဟိန်းထက်အောင်'s Page - MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT Professionals
Blog Posts (7)Discussions (18)EventsGroups ဟိန်းထက်အောင်'s Likes RSS
Loading feed	ဟိန်းထက်အောင်'s Friends
View All ဟိန်းထက်အောင်'s Discussions
PayPal နဲ့ချိတ်ပြီး... Online Shopping Site ဘယ်လိုရေးရလဲ ?
ကျတော် Shopping Site တစ်ခုလုပ်နေတာပါ ရောင်းရင်းတို့...အခက်အခဲကြုံနေရတဲ့ အပိုင်းက Payment System ပိုင်းပါ........သိချင်တာလေးတွေမေးပါရစေဗျာ..... Pyament System မှာ Paypal နဲ့ချိတ်ပြီး…ContinueTags: Web, Asp.net, Programming, PHP, Development Started this discussion. Last reply by ဟိန်းထက်အောင် May 4, 2012. အနာဂတ် Window7Phone
Window7Phone တွေ.. မြန်မာမှာရော အသုံးပြုမှုရှိပါသလား...?Window7Phone တွေဟာအနာဂတ်မှာ iOS,Android,Symbian တို့ကဲ့သို့ ခေတ်စားပြီး အသုံးများလာနိုင်ပါသလား.. ?Window7Phone Developer တစ်ယောက်ဖြစ်ဘို့…ContinueTags: Development, Mobile, C#, Whidow7Phone Started this discussion. Last reply by ဟိန်းထက်အောင် Apr 10, 2012. View All
ဟိန်းထက်အောင် has not received any gifts yet
ဟိန်းထက်အောင် commented on ဟိန်းထက်အောင်'s blog post HR Management System ,Payroll,Time and Attendance"မြန်မာနိုင်ငံထဲက Software House တွေရောင်းတဲ့ဈေးလေးသိချင်လို့ပါခင်ဗျ"Oct 18, 2012NeoAries commented on ဟိန်းထက်အောင်'s blog post HR Management System ,Payroll,Time and Attendance"Hi
Please takealook at http://www.orangehrm.com for HRM application.
There have many service plan including SAAS cloud service and open source license.
Download link. http://www.orangehrm.com/download.php
Features link.…"Oct 18, 2012ဟိန်းထက်အောင် postedablog postHR Management System ,Payroll,Time and AttendanceHR , Payroll and Time and Attendance Software Information လေးတစ်ချက်လောက်သိချင်လို့ပါ..၀ယ်မယ်ဆိုဘယ်ဈေးလောက်ပေါက်မလဲမသိဘူး..သိတဲ့လူရှိရင်တစ်ချက်လောက် heinhtataung@gmail.com ကိုမေးပို့ပေးထားပါအုန်းခင်ဗျကျေးဇူးပါ.See MoreOct 18, 2012 2
ဟိန်းထက်အောင် shared ဦးဇာနည်'s blog post on Facebookကဲ Android to PC Remote တဲ့ဗျာ....Oct 18, 2012ဟိန်းထက်အောင် shared Ye Htut's blog post on FacebookLooking foraBusiness Partner in Burma!Oct 18, 2012brianhtun liked ဟိန်းထက်အောင်'s blog post Window 8 and Window7/8 PhoneJun 5, 2012brianhtun commented on ဟိန်းထက်အောင်'s blog post Window 8 and Window7/8 Phone"im not developer im user only. :-)"Jun 5, 2012brianhtun commented on ဟိန်းထက်အောင်'s blog post Window 8 and Window7/8 Phone"window mobile ဖုန်းတွေဟာသုံးရတာနည်းနည်းတော့ အလုပ်ရှုပ်တယ် မသုံးတတ်ရင်ပြောတာပါ။
နောက်ပြီးတော့ ဂျီကျတတ်တဲ့ကလေးလို ဟိုဟာလိုချင်ဒီဟာလိုချင်နဲ့အမြဲပူဆာတဲ့ကလေးတစ်ယောက်လို
ပါဘဲ။ ကွန်ပြူတာမှာ Window OS ကိုသုံးရလွယ်ပေမယ့်ဖုန်းမှာတော့မလွယ်ဘူး အလုပ်ရှုတ်တယ်…"Jun 5, 2012yenaungkyaw liked ဟိန်းထက်အောင်'s blog post Window 8 and Window7/8 PhoneMay 31, 2012IT-KOKO commented on ဟိန်းထက်အောင်'s blog post Mobile + Desktop နဲ့ Myanmar Unicode ကို Microsoft မှသွင်းပေးလိုက်သော Window8"Ths :)"May 16, 2012ဟိန်းထက်အောင် updated their profileMay 8, 2012ဟိန်းထက်အောင် shared their blog post on FacebookSession , Application , Viewstate , ServerstateMay 4, 2012Nick Ngwe and ဟိန်းထက်အောင် are now friendsMay 4, 2012ဟိန်းထက်အောင် replied to ဟိန်းထက်အောင်'s discussion PayPal နဲ့ချိတ်ပြီး... Online Shopping Site ဘယ်လိုရေးရလဲ ?"Extremely thanks for the sharing and lighting-up my friend. :)
"May 4, 2012Nick Ngwe replied to ဟိန်းထက်အောင်'s discussion PayPal နဲ့ချိတ်ပြီး... Online Shopping Site ဘယ်လိုရေးရလဲ ?"Bro
Just to share some inforemation from the book.
Businesses of any size can benefit from the reliable and trusted PayPal brand. Using PayPal for osCommerce transactions is also one of the easier modules to work…"May 4, 2012ဟိန်းထက်အောင် replied to ဟိန်းထက်အောင်'s discussion PayPal နဲ့ချိတ်ပြီး... Online Shopping Site ဘယ်လိုရေးရလဲ ?"Thanks my brother Wayne... :)
Programmer , Student
HR Management System ,Payroll,Time and Attendance
Posted on October 18, 2012 at 9:46am2Comments
HR , Payroll and Time and Attendance Software Information လေးတစ်ချက်လောက်သိချင်လို့ပါ..
သိတဲ့လူရှိရင်တစ်ချက်လောက် heinhtataung@gmail.com ကိုမေးပို့ပေးထားပါအုန်းခင်ဗျ
ကျေးဇူးပါ. Mobile + Desktop နဲ့ Myanmar Unicode ကို Microsoft မှသွင်းပေးလိုက်သော Window8
Posted on April 24, 2012 at 10:28am 1 Comment
http://it-koko.info/2012/03/01/window-8-preview/ Window 8 and Window7/8 Phone
Posted on April 3, 2012 at 4:32pm2Comments
Window 8 ထွက်ပေါ်လာတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်..... ကျတော်သိချင်တာက
အနာဂတ်မှာ Android , iOS တွေနဲ့အတူတူ Window Phone တွေဟာ ခေတ်စားလာနိုင်လား.... ?
Android , iOS , Symbian OS တွေကို ယှဉ်နိုင်ပမလား.... ??
သူ့ရဲ့အဓိက Features တွေကဘယ်လိုရှိသလဲ... ??
.net Developer တစ်ယောက်အနေနဲ့ Window Phone ရဲ့ အနာဂတ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မဲ့ အခြေအနေလေးတွေကို သိချင်ပါတယ်.. Senior များ ....
Web Service နဲ့ Digital Sign
Posted on April 2, 2012 at 12:15pm0Comments
Web Service နဲ့ Digital Sing ကို Drupal မှာ ဘယ်လို ထိုးပေးရမှာလဲသိရင် ပြောပြပေးကြပါခင်ဗျာ
for example (how to signadigital certificate?) AddaBlog Post
At 11:46pm on April 3, 2012, Wayne said… please transfer your blog posts to discussion
You may use blog to share what you know.
If you want to ask use discussion